कफिले जस्तो सुकै दागलाई पनि सजिलै पार्छ सखाप ! यसरि गर्नु प्रयोग – Kavreonline
कफिले जस्तो सुकै दागलाई पनि सजिलै पार्छ सखाप ! यसरि गर्नु प्रयोग
By kavreonline	 On May 15, 2019
सुन्दरता महिलाहरुको लागि एक प्रतिक हो । तर अनुहारमा आएका विभिन्न दागको कारण महिलाहरुको सुन्दर हुने चाहनामा परिवर्तन देखिएको हुन्छ । लामो समय देखि अनेकौ उपाय अपनाएर उपचार गर्दा गर्दै थकित भएर उपचार गर्नै छोडेका हुन्छन् ।
यस्तो समस्या धेरै महिलामा हुने गर्छ । अनावश्यक दाग हटाउन हजारौ हजार पैसा पनि र्खच गरिसकेका हुन्छन् । त्यसकारण यस्तै चिन्तामा परेका महिलाहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लामो समयदेखि रहेका जिद्दी दागलाई कसरी हाउने भन्ने बारे बताउन गइरहेका छौँ ।
आवश्यक सामाग्री – जेलाटिन पाउडरकफी , पानी – बनाउने तरिका : एउटा सफ कचौरा लिने र त्यसमा एक चम्चा जेलाटिन पाउडर, एक चम्चा कफी राखेर पानी हालेर राम्रोसँग फिट्ने । त्यसपछि एउटा कचौरामा चिसो पानी राखेर केही समय पाउडर र कफी मिसेर बनाएको पेस्टलाई त्यतिकै राख्ने । अब एक चम्चा मह र कागतीको रस राखेर राम्रोसँग फिट्ने । अब कफी र जेलाटिन पाउडरको पेस्ट तयार भयो ।
एजेन्सी । अब हामीले केही नयाँ काम सुरु गछौँ, तब कयौँ समस्या आउने गर्दछन्। कुनै व्यक्तिले ती समस्याबाट हैरानी भएर कामलाई अधुरै छोडिदिन्छन् भने कुनै व्यक्ति ती समस्यासँग जुधेर लगातार काममा लागिरहन्छन्। तर कुनै बेला यस्तो समय आउछ समस्या घटनुको साटो अझ बढ्दै जान्छ।
यो समस्या हाम्रो समयको साथसाथै हाबी हुँदै जान्छ। र हामी कमजोर बन्दै जान्छौँ। समस्याले हाम्रीलाई तनावमा पार्नुका साथै तर्क शक्तिमा समेत कमजोर बनाउदै लैजान्छ।
एक अनुसन्धानका अनुसार समस्याले हाम्रो प्रवृति अनुसार आफ्नो रंग देखाउने गर्दछ। यदी हामी सकारात्मक छौ भने त्यो सडकको स्पीड ब्रेकर जस्तै हो। अर्थात केही समयमा हाम्रो गति थोरै कम हुन्छ र फेरि दौडिन थाल्दछ।
महान साहित्यकार जार्ज बर्नार्डले भने अवरोधले हाम्रो सफलतालाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ। हामीले जति बाधा, अबरोध पार गर्दै जान्छौँ त्यती बलियो हुँदै जान्छौँ।
यी कुराले हामीलाई सफलतामा अवरोध ल्याउछ :
यदी हामीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न तयार नभएर विभिन्न किसिमका बाहाना बनाउन थाल्यौँ भने हामीले सफलता भन्दा असफलता प्राप्त गछौँ।
कयौँ समय हामी समस्या समाधान गर्नु भन्दा समस्यासँग डराएर भाग्यौँ भने हामी कहिलै सफल हुन सक्दैनौँ।
केही गर्न अघि नसर्नु
धेरै मान्छे केही काम गर्नु अघि डराउने गर्दछन्। यदी हामी जुन काम गर्दा पनि मनमा डर पालेर बस्नेहो भने कहीलै सफता पाउन सक्दैनौँ। असफलताबाट पाठ नसिक्नुम बिचमै छोडिदिन्छौँ भने जीवनमा कहीलै सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ।
केही समय पहिले यसरी भएको थियो अन्जना लामाको फोटोसुट, अब सम्झनामा मात्र रह्यो !
महंगीदै गएको गोलभेडासंग रबिको सेल्फी, चोरी होला भनेर बोकेर स्टुडियोमै पुगे (भिडियो)
बिहानै खालीपेटमा यस्तो बनाएर ३ गिलास पानी पिउनुहोस् : केही दिनमा सुरु हुन्छ यस्तो…
टाउको घुम्नु, शरीर हल्लिएको अनुभव हुनु, रिगटा लाग्ने भए डाक्टर कहाँ पुगिहाल्नुहोस्
महिलामा महिनावारी हुँदा पेट किन दुख्छ, उपचार के गर्ने (भिडियो रिपोर्ट सहित)